Kiraro lamaody kingboKB-SL57 Kiraro kiraro kiraro vehivavy, China kiraro kiraro karajiaKB-SL57 Vehivavy kiraro ba kiraro mpamokatra, mpamatsy, mpamokatra - Ningbo Kingbo International Trade Co., Ltd.
Kiraro amin'ny tsindrona
Eto ianao : Home>Product>FANAHY HAFA>Lady
kiraro lamaody kingboKB-SL57 Kiraro Sock Women Breathable
Fepetra fandoavana: L / C, D / A, D / P, T / T
MOQ: tsiroaroa 1000
F1, Manao ahoana ny kalitaon'ny vokatrao?
A1: Izahay dia orinasa Zhejiang, mpamokatra kiraro kalitaon'ny hoditra Mid sy Avo indrindra ary efa nafarana tany Eropa.
F2, ianao no orinasa mpanamboatra na mpivarotra?
A2: Samy izy ireo. Efa an-taonany maro izahay no nirotsaka tamin'ity sehatra ity, ka hitazona ny mpanjifanay ny vidin'ny fifaninanana. Ary ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy aorianay dia tsara kokoa noho ny hafa.
Orinasa: Ningbo Kingbo International Trade Co., LTD.
Adiresy: efitrano 1806, tranobe avaratra, trano lehibe, lalana shuimen, Cixi, Ningbo, PRChina
Mailaka: shen@nbkingbo.com / lulu@nbkingbo.com
Telefaona: + 86-13805818602 / 0574-23718050
Ningbo Kingbo International Trade Co., Ltd. dia niorina tamin'ny 1995, manampahaizana manokana amin'ny fanondranana kiraro izy io. Any afovoan'i Cixi, Ningbo, akaikin'ny Bridge Hangzhou Bay sy seranan'i Ningbo no misy azy. Ny orinasa misy anay dia any Wenling, Taizhou, misy efitrano fampiratiana mihoatra ny 600 metatra toradroa. Raha jerena ny traikefa manankarena sy ekipa matihanina amin'ny famokarana kiraro sy fanondranana, miaraka amin'ny kalitao sy serivisy avo lenta ho an'ny mpanjifantsika, antenainay ny hanangana orinasa maharitra fifandraisana aminao.
Ny orinasanay dia mirotsaka amin'ny karazana kiraro isan-karazany, manondrana kiraro fanatanjahan-tena indrindra izahay. Ankoatr'izay, manarona ny kapa izahay, ny lamba canvas, ny kiraro hoditra sns, izay afaka mamaly ny fitakian'ny mpanjifa rehetra. Angletera, Espana, Aostralia, Filipina sns. Ny mpanjifanay koa dia miovaova, kiraro tsy mandany, shoezone, mrpsport ary SM no mpanjifanay voalohany, manana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra miaraka aminay izy ireo.
Ny kalitao avo lenta dia ny fitsipiky ny famokarana orinasa, noho izany dia manana rafitra fitsapana feno sy mandroso izahay hanatsarana ny kalitaon'ny famokarana hatramin'ny faratampony lehibe.Ohatra, milina fitsapana herinaratra, milina fanandramana milina fanodinana, milina fanandramana abrasion ary atrikasa fanodinana atrikasa 19 milina fanindronana 470T max, izy rehetra ireo dia afaka miantoka ny fahaizan'ny fitsapana.
kingbo SKB-SL02 New Design Modern kiraro famoriam-behivavy
kingbo KB-SL20 Volavola lamaody azo sintonina mihazakazaka kiraro vehivavy fehin-kibo manja kiraro fanatanjahantena vehivavy
kingbo KB-SL35 Famoronana endrika lamaody azo hazakaza-kiraro mihazakazaka vehivavy kiraro fanatanjahan-tena vehivavy kiraro
kingbo KB-SL44 Volavola lamaody azo sintonina mihazakazaka kiraro vehivavy fehin-kibo manja kiraro fanatanjahantena vehivavy
Efitrano 1806, trano avaratra, trano lehibe, lalambe shuimen, Cixi, Ningbo, PRChina
Ateraky ny tontolo andro, efa miandrandra ny fifandraisanao
karazana verinia WhatsApp Phone Top